Engineering Prototype | Fitsapana ny mari-pahaizana momba ny famolavolana endrika & injeniera - Createproto - Createproto Tech Co., Ltd.
APPLICATIONS / Fanamarinana injeniera
Ao amin'ny CreateProto, azontsika atao ny manao kopia sy / na maka tahaka ny zava-bita rehetra azo tratrarina amin'ny famokarana, ary mitoetra ao anatin'ny habetsahan'ny prototypa iray. Nanangona vitsivitsy amin'ireo ohatra farany tianay izahay izay mampita tsara ireo safidy misokatra ho anao ho an'ny rindranasao.
Mampiasà Prototypes momba ny injeniera hiantohana ny famolavolana ny famokarana
Ampio ny fahatokisanao amin'ny alàlan'ny fanandramana fanamarinana
Rehefa miroso amin'ny dingana manaraka ny fivoaran'ny vokatra dia zava-dehibe kokoa ny fanaovana programa fanandramana fanamarinana ny vokatra izay manome valin'ny fitsapana sy fandalinana.
Ny fitsapana ara-teknika sy fanamarinana famolavolana dia fanandramana fanamarinana manokana momba ny vokatra natao tamin'ny prototypes injeniera na singa nialoha ny famokarana. Azon'izy ireo atao ny manamarina raha mifanaraka amin'ny famaritana sy ny fahombiazan'ny vokatra andrasana ilay famolavolana, izay ao anatin'izany ny fanandramana fampiasa amin'ny laoniny, ny fizotran'ny famokarana, ny fandrefesana ny parametrica ary ny fanamarinana ny fenitra fanamarinana.
Rehefa mihetsika ny dingana fanamarinana avy amin'ny prototype injeniera amin'ny alàlan'ny fanamarinana injeniera (EVT), fanamafisana ny famolavolana (DVT), ary ny fanamarinana famokarana (PVT), ny dingana tsirairay dia mifantoka amin'ny fanatsarana ny endrika sy ny famokarana. Raha te-hanamarina amin'ny fomba mandaitra ny volavolanao dia tandremo tsara ireto singa telo lehibe amin'ny famolavolana ireto: ny fahaiza-miasa, ny fahaizanao mamokatra ary ny fahaizanao miaina.
Ny prototypes momba ny injeniera amin'ny fananganana trano dia mety ho vahaolana tsara indrindra ho anao
Hendry mandrakariva ny mandinika ireo fenitra fanamarinana na làlana fanamarinana ho an'ny vokatrao amin'ny fiandohan'ny dingan'ny fampandrosoana. Rehefa nanjary nitaky fitakiana ny ora sy ny vidin'ny fanovana ny famolavolana, ny famoronana prototypes enti-mahatoky avo lenta izay maneho ny vokatra farany, manamora ny fanamarinana ny famolavolana, ny injeniera ary ny famokarana, alohan'ny hampiasana vola amin'ny fitaovana lafo vidy ary hametrahana azy ireo amin'ny famokarana.
Ireo prototypes injeniera miasa sy tena marina na prototypes mialoha ny famokarana dia matetika mampiditra singa maromaro sy faritra mekanika mihetsika. Ny fomba mety sy mahomby indrindra amin'ny famoronana singa samihafa amin'ny lafiny fizotrany sy ny fitaovana dia hojerena mba hahazoana antoka fa ny prototype vita dia maka tahaka tsara ny vokatra fampiasa farany. Izy io dia ahafahanao manao fitsapana mafy sy fanamarinana alohan'ny hanateranao ny volanao amin'ny famokarana.
Mpiara-miaro prototyping ho an'ny fanamarinana momba ny injeniera / endrika
Miaraka amin'ny 20 taona mahery amin'ny injeniera sy ny maodely fanaovana maodely, mivelona amin'ny tetik'asa misy fanamby ara-teknika ho an'ny injeniera prototype i CreateProto.
Izahay dia mamolavola ny vahaolana haingana ho an'ny tetik'asa fampandrosoana mba hitondra ny vokatrao amin'ny dingana fanamarinana farany. Azontsika atao ny mampiasa ny traikefantsika ara-teknika amin'ny famolavolana milina CNC avo lenta, fampitaovana tetezana prototypa ary famolavolana tsindrona haingana, manome ny torohevitra tsara indrindra momba ny singa arakaraka ny fitaovana, ny fizotrany, ny fandeferana ary maminavina ireo olana mety hitranga hiatrehana ireo olan'ny injeniera ao aminao.
Miaraka amin'ireo injeniera matihanina sy mpitantana ny tetikasa, ny CreProto dia tsy manam-paharoa amin'ny prototyping ny vokatra ary mitazona hatrany ny fiaraha-miasa tsy tapaka miaraka amin'ny mpanjifa, afaka manome fanohanana mitohy mandritra ny fampandrosoana ny vokatra.
3 karazana fitsapana ny fizotran'ny fanamarinana
Fitsapana fanamarinana injeniera (EVT)
Ny noforonin'ny EVT dia prototype injeniera amin'ny alàlan'ny machining CNC, fanariana fantsona, na fitaovan'ny tetezana. Mitaky fitaovana enti-mamokatra sy fizotry ny famokarana izany raha ilaina. Saingy ny ampahany fanontana 3D dia tsy azo ampiharina amin'ny EVT.
Fitaovana 20-100 mahazatra
Ireo singa dia tokony hiasa sy hosedraina tanteraka
Mampiasà fandeferana henjana kokoa hihaonana amin'ny famaritana fampisehoana fitsapana
Ny data momba ny andrana dia jerena mba hahazoana antoka fa tratra ny fahombiazana takiana, ny fitsapana fototra ao anatin'izany ny herinaratra, ny hafanana ary ny EMI
Sariho ny fahalemen'ny famolavolana misy fiantraikany lehibe ary atoroy ny fanovana mety hanatsarana ny vokatra
Matetika ny fananganana fananganana EVT faharoa aorian'ny fanovana natao.
Fitsapana fanamarinana mari-pahaizana (DVT)
Ny fananganana DVT dia misy kinova farany amin'ny singa rehetra sy ny singa famolavolana araka izay azo atao. Manamarina ny fizotry ny famokarana ireo vokatra amin'ny alàlan'ny tranokala fanamboarana amin'ny hazakazaka ambany. Matetika ny singa mialoha ny famokarana dia vita amin'ny famolavolana tsindrona haingana na fanamboarana volavola ambany ary araho ny fomba famokarana.
100-1000 unit matetika
Ny faritra rehetra dia tokony avy amin'ny fitaovana bobongolo na ny fizotry ny famokarana
Hamarino fa mahafeno ny fepetra takiana amin'ny kosmetika sy tontolo iainana ny vokatra
Ny programa fitsapana dia feno, manarona ny andininy rehetra amin'ny fenitra mifandraika amin'izany
Mitaky famakafakana tsy fahombiazana haingana sy hetsika fanitsiana
Hamarino ny fanamarinana sy ny fenitra momba ny vokatra any amin'ny firenena na faritra samihafa.
Famerenana fanamarinana famokarana (PVT)
Ny dingana fanamarinana famokarana dia ny famokarana ofisialy voalohany. Hanangana tsipika famokarana mpanamory fiaramanidina ianao hanamarinana raha misy tsy fahombiazana amin'ny dingana rehetra amin'ny tsipika famokarana ary hanombatombana ny fomba hanatsarana ny fizotrany ianao.
Matetika 500-2000 unit, na mihoatra aza
DFM (Design For Manufacturing) dia vita ary vonona ny bobongolo, tsy misy fanovana natao tamin'ny fitaovana
Raha mandeha tsara ny zava-drehetra dia natao hamidy amin'ny mpanjifa ny singa rehetra
Hamarino ny famokarana betsaka (vokatra, habetsahana, fotoana, fotoana fanamboarana sns.)
Fomba fametrahana sy famolavolana tsipika feno amin'ny toerany
Ny fomba fiantohana kalitao (QA) sy ny fibaikoana ny kalitao (QC) dia tsy maintsy hamboarina sy hosedraina
Hatreto, ny ampahany mahaliana indrindra amin'ny dingana PVT dia miandry valiny avy amin'ireo mpampiasa anao voalohany.
Cnc Prototyping haingana, Prototyping haingana sy famokarana, Serivisy fanaovana pirinty 3d sy Prototyping haingana, Cnc Prototyping, Prototyping haingana, Prototyping haingana,